Home News MW Farmaajo oo da’daal ugu jiro sidii uu uga qayb gali lahaa...
MW Farmaajo oo da’daal ugu jiro sidii uu uga qayb gali lahaa kulanka isku sawirka MW Donald Trump?
Sida caadada ah Madaxweynayaasha dalka Mareykanka ayaa inta uu socda shirka Qaramada Midoobay ee sandalaha ah waxa ay kulan la qaataan madaxda wadamada Africaanka kuwaas oo MW Mareykanka la qaato kulan wadareed hal meel ka dhaca.
Kulankaan ayaa marka uu dhamaado Madaxweyne kastaa oo African ah waxaa fursad loo siiyaa in ay isku sawiraan MW Mareykanka. MW Farmaajo oo lagu yaqaano caqliga faanka iyo been abuurka aan salka lahayn ayaa waxaa uu da’daal ugu jiraa in uu ka qeyb galo kulan wadareedkaas si uu fursada ugu helo in uu isku sawiro MW Donald Trump. Horaantii sanadkaan ayaa ay ahayd markii MW Farmaajo uu heshiis kula galay shirkad gaar loo leeyahay oo fadhigeedu yahay dalka Mareykanka si ay uga shaqeeyaan sidii uu Farmaajo kulan gaar ah ula yeelan lahaa MW Trump. MW Farmaajo ayaa siiyay shirkadaas lacag gaaraysa $400 oo kun oo doolarka (afar boqol oo kun oo doolar) Mareykanka ah halka Sanadkan dabayaqadiisana uu kula heshiiyay shirkada in uu bixin doonto inta ka hartay heshiiska oo ay ku baxayso aduun gaaraya ah $200 oo kun oo doolar (labo boqol oo kun oo doolar).
Kulamada noocaan ah ayaa waxa horay uga qeyb galay qaar ka mida mas’uuliyiintii hore dalka soo maray iyaga oo aan wax qarash ah uga bixin ka qeyb galka kulamadaas.
Qaar ka mida sawiradaas halkaan ka daawo:
Previous articleHabeenkii xalay ahaa oo qof si xun loogu dilay suuqa xoolaha
Next articleSiyaasadda qar iskatuurka Farmaajo iyo kulanka sadax geesoodka ee ka dhacay Jiddah! Sidee buu u saameyn doonaa Somaliya?
Dacaayad ka dhan ah Muna keey oo Villa Soomaaliya lagasoo abaabulaayo...
Taliska Ciidanka Bada ee Puntland Maxay Ka Dhaheen Khilafka Siyasadeed ee...